Yunivarsiitiin Ameerikaa MITn roobootii dandeettii gufuu utaaluu qabdu uume - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Yunivarsiitiin Ameerikaa MITn roobootii dandeettii gufuu utaaluu qabdu uume
Yunivarsiitiin Ameerikaa MITn roobootii dandeettii gufuu utaaluu qabdu uume
Robootonni waa heddu akka hojjatan nibeekna. Roobootonni hujii nama gargaaruu bira ce’anii gara waan namni hojjachuu hindandeenne ykn hojjachuuf bira hingeennetti ce’aniiru. Yeroo kanatti tajaajilli roobootii hospitaalaa, worshaaleefi laaboraatoorii adda addaa keessatti qofa kan daangeffamee miti. Dachii Maarsii irratti osoo hinhafine, roobootiin, asiifi achi socho’aa qorannoo kan geggeessaa, odeeffannoo daddabarsaa- waan ilmi namaa hinbeekne beeksisaa kan jiran.
Guddina tajaajila roobootonni ilma namaaf laatan qajeelatti kan bare dhalli ilma namaa roobootota yeroo yerotti fooyyessuufi qaroomsuu irraa hinboqanne. Roobotonni gadaa tanaa saffisa addaa qabu; sammuun dafanii yaaduu. Hunda caalatti fooyya’iinsi roobootota irratti mul’ataa dhufe akkuma ilma namaa, ammattai hedduu fagoo jiraatanis, dandeettii battalumatti (real time) yaaduu gonfachuu isaaniiti. Kana jechuun akka durii wontuma itti himame qofa qabatanii bayanii yoo haalli itti jijjiirame dhagatti hinbu’an, qilee irraas hinbdan. Haala wojjiin tankaarfatu, jijjirama uumame hubatu; robootonni ammaa. Dandeettii battalumatti (real time) yaaduu qabaachuun roobootonni haala yeroo hubachuun rakkoo isaan mudatu jala dabruufi odeeffannoo dabalataas sassaabuu danda’u. Kuni umrii rooboototaa dheeressa, tajaajila namaaf laatanis dacha taasisa.
Yunivarsiitiin Ameerikaa MIT roobootii Cheetah 2 jedhamtu uumee jira. Robootiin tuni abshaalummaa addaa qabaachuu qofaa miti akka hedduu faarfamtuufi leellifamtu kan isii godhe. Cheetah 2 dandeettii waa utaaluus qabdi; gufuu fundura ufiitti argite. Ammaaf Cheetah 2 kan utaaltuu dandeettu hanga dheerina seentiimeetira 40 qofa.
Cheetah 2 dandeettii gufuu fundura isii jiru utaaluu kan argatte kaameraa (sensor) qabdu irraa. Takka waan fundura isii jiru arginaan hojjaa waan sanii heerreguun Cheetah 2f waan salphaadha. Hojjaa waan fundura isii jiru hubannaan utaaluu qofa.
Dandeettii/abshaalummaa roobootii Cheetah 2 hubachuuf viidiyoo kana ilaalaa.
Previous articleEthiopia : a leadership in disarray (René Lefort- republished )
Next articleWantoonni namoonni Facebook irratti gadilakkisan amala isaanii calaqqisa, jedhu qorattoonni